« Fier Mada 2016 » : tsenaben’ny fifanakalozana | NewsMada
« Fier Mada 2016 » : tsenaben’ny fifanakalozana
Anisan’ny hetsika lehibe eto an-toerana sy manana ny lanjany iraisam-pirenena amin’ny fambolena, fiompiana, jono ny « Fier Mada ». Fotoana hihaonan’ny mpamokatra sy ny mpanjifa mivantana ary indrindra, andraisan’ny faritra 22 anjara.
Nanomboka, omaly hatramin’ny alahady 7 aogositra ho avy izao ny « Foara iraisam-pirenena miompana amin’ny toekarena ambanivohitra » (Fier Mada) andiany faha-18. Hatao etsy anatin’ny tokotany malalaky ny kianjan’i Mahamasina ny hetsika, ahitana tranoheva 345, iandrasana mpitsidika maherin’ny 50.000.
Nambaran’ny filohan’ny « Fier Mada » fa tafapetraka, ankehitriny, ny maha foara iraisam-pirenena azy, amin’izao faha-18 taona nisiany izao. Mandray anjara ao avokoa ny avy any amin’ny faritra 22 eto amin’ny Nosy, eo amin’ny lafiny fambolena, fiompiana, jono, famokarana sy fikarakarana sakafo, taozavatra, sns.
Tohanan’ny Japoney ny fambolem-bary
Fotoana hihaonan’ny mpamokatra sy ny mpamatsy mivantana. Eo koa ny mpanamboatra fitaovam-pambolena, ny mpivarotra na mpamatsy fitaovam-pamokarana sy fanodinam-bokatra avy amin’ny fambolena na fiompiana. Eo koa ireo mpisehatra amin’nylafiny fambolena sy ny fiompiana na jono samihafa, toy ny sampandraharaha ara-bola madinika (IMF), ny banky, ny angovo azo havaozina, ny mpanangom-bokatra, ny fandaharanasa na tetikasa amin’ny tontolo ambanivohitra sy ny tontolo iainana, sns.
Mpanohana mivantana ny “Fier Mada 2016” ny Fiaraha-miasa japoney ho an’ny fampandrosoana (Jica). Anisan’ny fandaharanasa lehibe tohanany eto Madagasikara ny fampitomboana ny voka-bary (Papriz andiany faharoa). Mpiara-miombon’antoka lehibe koa ny orinasa mpanamboatra fitaovam-pambolena CFAMA.